Thenga iWindows PrinterEepson Wood Printer China Manufacturer
Incazelo:I-Printer yezinkuni ezizenzelayo,I-Japanese Woodblock Printer,I-Mini Wood Printer
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta yezinkuni > Thenga iWindows PrinterEepson Wood Printer
Iphrinta yezinkuni ingaphrinta izithombe ezimibalabala kunoma iyiphi impahla enekhwalithi engcono kakhulu. Thenga i-Printer Wood I-Eepson Wood Printer xhuma nekhompyutha evamile, noma iyiphi i-picutre kukhompyutha yakho ingashicilelwa.
Ikhwalithi yokunyathelisa iphelele, ukucaca okuphezulu, ukuvikela izithombe kusukela ekuqaleni, amanzi, nokukhanya kwelanga, umbala ngeke uphele phansi, Izindleko zokunyathelisa ziphansi, nje u-0.6 $ ngemitha yesikwele.
Noma iyiphi into ephakanyisiwe engaphansi kuka-15 cm, Noma yimuphi into enesisindo ngaphakathi kuka-55KG ingashicilelwa.
Izici eziwusizo ze- Homemade Wood Printer yethu RF-A3UV:
2. I- Japanese Woodblock Printer ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
I-Printer yezinkuni ezizenzelayo I-Japanese Woodblock Printer I-Mini Wood Printer I-Printer yezinkuni ezithengiswayo Iphrinta yeBiscuit ezenzakalelayo Iphrinta ye-Candy ezenzakalelayo I-Latte Art Printer Inkoni edlayo I-Printers Cake neNkathi Edlayo